UkuBloga kweNdwendwe-Uyenza ngokungalunganga | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 26, 2013 NgoMvulo, Agasti 26, 2013 ULarry Alton
Ngexesha elinye, i-backlinks yalawula umhlaba wokulungiswa kweinjini yokukhangela. Xa umgangatho wesiza wawulinganiswa ngokwePageRank, i-backlinks yanikezela ngokufunwa emva kweevoti eziqhuba le metric. Kodwa njengoko ialgorithm kaGoogle ikhula, irenki yewebhusayithi ayinakuphumla kuphela kwinani lamakhonkco akhomba kuyo. Umgangatho wendawo yokubamba ikhonkco yaqala ukuthwala ubunzima ngaphezu kwenani eliqhakamshelweyo lesiza.
Oku kuye kwabangela ukuba kuqhelaniswe nokubhalwa kwebhlog yeendwendwe kwezinye iisayithi. Intengiselwano ibisisiseko; ubonelela ngewebhusayithi ngomxholo kwaye bakunika i-backlink. Nangona kunjalo, njengazo zonke ezinye iindlela zokwakha amakhonkco, ukuxhatshazwa kubhengezwe kwiindwendwe. Iiwebhusayithi zamiselwa ngaphandle kwesizathu ngaphandle kokubamba iindwendwe, iisayithi ezihlawulisa abantu ukuba bathumele amanqaku abo, abantu ababhala izithuba zeendwendwe bavelise i-junk enganikeli xabiso, kwaye inqaku lokujikeleza kwaba yinto eqhelekileyo. Kwakungumbandela wexesha ngaphambi kukaGoogle yaqhekeka kwakhona kwaye ndaqala ukuvavanya le ndlela yokwakha ikhonkco.
Xa kukhutshwa uhlaziyo lwe-Penguin, iindwendwe ezinomthunzi zithumela amaqhinga ngaphambili nakwiziko; Abantu abaninzi bakuthathe oku kuthetha ukuba ukubhloga kweendwendwe kwakungasekho sisicwangciso esisebenzayo kuba iisayithi ezininzi zohlwaywa ngenxa yeendlela zabo zokubloga kweendwendwe.
Ngenxa yoko, amanye amashishini anikezele ngokuthumela iindwendwe zizonke, kuba babephantsi kwengcinga yokuba amakhonkco awasabalulekanga. Nangona kunjalo, ngaphandle kwazo zonke izinto ezimbi onokuthi uzive malunga nefuthe le-backlinks elinazo kwimizamo yakho ye-SEO, zisabalulekile. Ngokwenyani, zibaluleke kakhulu. Ngokwe-Searchmetrics 2013 Izinto ezisetyenzisiweyo,
“I-Backlinks iyaqhubeka ukuba yenye yeendlela ezibaluleke kakhulu ze-SEO. Kule meko, kuncinci okutshintshileyo kule minyaka idlulileyo: iisayithi ezinee-backlinks ezingaphezulu zilula nje.
Inyani yile yokuba ukubhloga kweendwendwe kusesisicwangciso esiliqili esibalulekileyo nesisebenzayo sokuthengisa, kodwa kuphela xa kwenziwe ngendlela eyiyo.
Ngelishwa, abantu kusenzima kubo ukuqonda indlela elungileyo yokuhamba malunga nokuthumela iindwendwe. Ngaphandle kwezikhokelo ezininzi ezibonelela ngeplani yokuphumelela, abakayifumani kwaphela. Benza iimpazamo ezifanayo amaxesha ngamaxesha. Kulabo baxhamla ngakumbi kwiimodeli ezingezizo, Nazi ezinye zeendlela ezingalunganga abantu abahamba ngazo kubhloga kweendwendwe.
Ukusika iiKona kuMgangatho
Eyona mpazamo ixhaphakileyo ndiyibonayo kukuba umgangatho womxholo abantu abawungenisayo kwizithuba zabo zeendwendwe awonelanga.
Nokuba uza kuwubeka phi umxholo wakho, unegama lakho. Imele uphawu lwakho, ke ukuba ufuna uphawu lomzekelo, umxholo wakho kufuneka ube ngumzekelo. Emuva xa bonke abantu babekhathalele yayiyi-backlink, umxholo wezithuba zeendwendwe zahluthwa zizinto zokugaya ezazisusa amanqaku ngobubhanxa ukunqanda isohlwayo sokuphinda.
Xa olu hlobo lomxholo lwalupapashwa kwisiza esinokubhencwa kancinci, lwalunethuba elincinci lokonakalisa igama lophawu lwakho. Kule mihla, iiposti zakho zeendwendwe kufuneka zisebenze ngeendlela ezahlukeneyo. Ukubeka iindwendwe zakho kwindawo elungileyo yesayithi kuthetha ukuba abantu bazakubabona kwaye benze uluvo malunga nawe ngokusekwe koko bakufundayo.
Ukukhetha iiSayithi ezingalunganga
Ngaphambi kwePenguin, ukuziqhelanisa nokubhloga kweendwendwe akuzange kugxile kakhulu kumgangatho wendawo yokubamba. Amanqaku angenisiwe kwiifama zomxholo kunye nezikhombisi zamanqaku kuba yonke into ebaluleke kakhulu yayiyi-backlink. I-Post Penguin, iisayithi ezenza oku zihlala zifunyanwa zisohlwaywa. Ayisiyo kuphela idiphu kwiziphumo zophando ezenzakeleyo, kodwa ikwayile ngqondo ibifutshane. Ukubhloga iindwendwe kuvula umnyango kwamanye amathuba amaninzi adlulileyo kwi-backlink.
Xa iposti yakho yeendwendwe ipapashwa kwindawo ehlonitshwayo kwishishini lakho kwaye inoluntu olukhulu indawo yakho eyindwendwe eyenzela izinto ezimbalwa:
Iphakamisa ulwazi kumathuba anokubakho
Ukumisela njengengcali yecandelo / ingcali
Yakha ukuthembela kwimpawu yakho
Indawo enoluntu olukhulu nolusebenzayo nayo inendawo enkulu yokufikelela. Abafundi kunokwenzeka ukuba babelane ngomxholo olungileyo, kwaye kunokwenzeka ukuba bandwendwele indawo yakho, bonyusa umgangatho wokuhanjiswa kwezithuthi.
Ukulinganisa umgangatho wesiza kunokwenziwa ngokujonga iindawo eziphambili zeemetwork. Ukuba injongo yakho kukuthumela kwindawo enezithuthi ezininzi, indawo enendawo ephantsi ye-Alexa iya kuba yinto ekujolise kuyo. Ukuba ufuna indawo eza kudlula ngaphezulu kwexabiso le-SEO kwiikhonkco, emva koko ufuna ukukhangela iisayithi ezineGunya leDomain eliphezulu. Ngokufanelekileyo, uya kufuna ukwenza umgudu wokufikelela kwiindawo ezahlukeneyo. Okungakumbi kuloo kwicandelo elilandelayo.
Enye yeengxaki kwi-backlinks kukuba ukuzifumana kunokuzenzekelayo. Ngokungenisa isikhombisi, uluvo logaxekile kwezinye iiblogi kwaye nangokuthumela iindwendwe. Ukufumana iisayithi ezingakhiyo i-backlinks ngokwendalo, iinjini zokukhangela zikhangele kwizalathi ezinje:
Isicatshulwa se-anch esenziwe ngaphezulu
Inani elingalinganiyo lezinto ezilandelwayo xa kuthelekiswa namakhonkco alandelayo
Inani elikhulu lokudibana okumgangatho ophantsi
Ukuthunyelwa kweendwendwe kukuvumela ukuba wakhe iprofayili yekhonkco efanelekileyo. Ezinye iiblogi ziya kukuvumela ukuba ubandakanye amakhonkco emzimbeni weposi yakho, ngelixa abanye banokufuna ukuba ubeke amakhonkco kuphela kumbhali wencwadi yakho. Enye indlela yokwahlula amakhonkco kukutshintsha isicatshulwa se-anchor. Sebenzisa amagama kunye namabinzana angakhange abonakale ngokulula kunye namagama aphambili okwenza uphando aya kwenza izinto zibonakale zendalo.
Elinye icebo kukundwendwela iiposti kwiibhloko ezingekho kushishino lwakho okanye kwi-niche, kodwa ziyafana. Umzekelo, ukuba uyinkampani yeinshurensi, ungabhala iiposti zeendwendwe kwiibhloko zempilo kunye nezempilo ezinxulumene nendlela ukuhlala usebenza kunye nokuba sempilweni kunokunciphisa iindleko zeinshurensi yobomi. Indawo ethengisa iikhompyuter inokufikelela kwiiblogi ezijolise kukhuseleko lwekhompyuter. Ukudibanisa ishishini lomnqamlezo kwizikhundla zabatyeleli kwipotifoliyo yakho ayincedi nje ukwahlula amakhonkco akho, kodwa ikwanceda ukuveza uphawu lwakho kubaphulaphuli abatsha.
Ukuthumela undwendwe akuncedi kuphela iwebhusayithi yakho; inokukunceda wakhe ubudlelwane obuqinileyo nabanye abantu kwishishini lakho. Funda iibhlog onqwenela ukusebenza nazo kwaye uthumele abanini bazo isingeniso esomeleleyo kunye nesicelo sokubhloga kweendwendwe.
Baxelele into ongathanda ukuyibhala kunye nendlela oyingcali ngayo kweso sihloko. Uninzi lwazo zonke, musa ukoyika ukubaxelela ukuba kutheni ufuna ukubhala indawo yabo. Ukunyaniseka kubenza bazi ukuba awuzami ukudlala umdlalo, kodwa endaweni yoko yakha ishishini lakho ngelixa unegalelo elifanelekileyo kubo.
tags: ukudala umxholobhengezo bendwendweiindwendwe kubloga ezona ndlela zilungileyoUhlaziyo lwepenguin
Ngaba ishishini lakho phakathi komthengi kunye nento abayifunayo?
Agasti 27, 2013 kwi-1: 07 AM
Esi siqwenga esikhethekileyo. Ukubhengezwa kweendwendwe kunokuba yindlela emnandi yokwandisa ubunkokheli bakho bokucinga ngaphakathi kwentsimi yakho… ukuba uyazi ukuba ungayenza njani ngokufanelekileyo.
Agasti 27, 2013 kwi-7: 59 AM
Ukuqonda. Ibhlog yethu ihlala yamkela izithuba zeendwendwe, kodwa siqinile kumgangatho kunye nasemva kokuqhagamshela. Ngethemba, ingqalelo kumgangatho iya kusithintela ukuba singaze sijonge nantoni na ngaphandle kwale siyiyo: ibhlog yethu izama ukubonelela ngexabiso kubafundi bethu.
Agasti 27, 2013 kwi-10: 18 AM
Fumana iqela le-niche ofuna ukuya kulo uze ufumane iindawo ezifanelekileyo. Iingcebiso ezintle. Ndicinga ukuba abantu banokuba nokungcamla okubi emilonyeni yabo ngoku kwiintsuku malunga nokubhloga kweendwendwe kuba unenani elikhulu labantu abafuna kuphela ukuba nendawo yeendwendwe ukuze bakwazi ukubhloga ibhlog yabo igcwele amakhonkco. Abantu bafuna ulwazi olukhulu, hayi amakhonkco, ukuba ubonelela ngesiqulatho esikhulu abantu banokufuna ukukukhangela.
Agasti 27, 2013 kwi-10: 35 AM
Ndiyavuma! Siyasokola nabantu abasebenza ngasemva abazama ukungena kwindawo yethu ngalo lonke ixesha. Siqale ukungalandeli konke amakhonkco kwizithuba-oko kuyanceda.
Agasti 29, 2013 kwi-5: 59 AM
Ndibe nexesha elimnandi lokufunda iposti yakho uLarry… Enkosi ngokwabelana!
Agasti 29, 2013 kwi-6: 55 AM
Iingcebiso ezintle uLarry. Ndiyaqinisekisa ukuba ubuncinci ndinezithuba ezilishumi elinesibini kwibhlog yam ngaphambi kokuba ndiqale ukubhloga kweendwendwe. Nantoni na engaphantsi koko iya kuthetha ukuba abafundi endibatsalayo kwezinye iiblogi baya kumka bedanile kwaye ngekhe baphinde babuye.
Agasti 29, 2013 kwi-9: 22 AM
Ingcebiso eyoyikekayo! Sihlala simangalisiwe kukuba zingaphi iinkampani ezikhuthaza iisayithi zazo ezinje ngobuqhetseba… kwaye akukho lwazi okanye ithuba lokuzibandakanya nenkampani xa abantu befika apho!